🥇 ▷ Android Q wuxuu noqonayaa Android 10 ✅
Android Q wuxuu noqonayaa Android 10
Mid ka mid ah astaamaha lagu qeexay nooc kasta oo Android ah markii si rasmi ah loo soo bandhigay wuxuu ahaa magaceeda la xiriira macmacaanka qaar. Laga soo bilaabo nooca ugu horreeya ee dhammaan, Android 1.0 Apple Cake, ilaa Android 9.0 Pie, tan ayaa noqotay kiis. Iyada oo nooc kasta oo cusub oo Android ah ixtiraamaysa xarfaha, Google wuxuu u bixiyay magaca nooca xiga ee Android mid macaan, laakiin tani waxay ku dhammaatay Android Q ama halkii, Android 10.
Waxay ahayd dadka ka tirsan Maamulka ‘Android’ oo fursad u helay dib-u-habeynta ay Google ku sameysay Android, maadaama magacyada laga reebo, waxaa sidoo kale isbadalo yar yar ku yimid astaamaha, midabada la adeegsaday, iwm. Android 10 wuxuu noqonayaa nooca koowaad ee nidaamkan qalliinka ee aan suuqa ku gaarin magac macaan dhiniciisa, taasina waxay muujineysaa wax aad u muhiim ah.
Android 10 wuxuu noqon karaa isbedelkii ugu horreeyay ee dhanka Fuchsia OS
Xilligii la bilaabayay noocyada beta ee Android Q, waxaan ka fikirnay waxa uu noqon doono nooca noocaan ah. Xarafka Q wuxuu ahaa mid aad u adag, laakiin bulshada ayaa horeyba u tixgelisay xulashooyinka ugu macquulsan. Ugu dambeyntiina, Google wuxuu doortey inuu ka tanaasulo naanaysyada qeybihiisa. Android Q wuxuu noqonayaa Android 10 waqtiga si rasmi ah loo soo bandhigo. Tan waxaa u dheer, midabka cagaaran ee Android wuxuu helay hue ka caqli badan, sida pastel, iyo Andy (robot) waxay leeyihiin dib u habeyn yar.
Fududeynta magaca nidaamka hawlgalka ee Google iyo waxyaabo kale ayaa ina siinaya dareenka gudbinaya halista ka sii culus. Magacyada macmacaanka aan jeclaannay, laakiin ugu dambeyntii waxay sameeyeen nooc kasta oo carruurnimo ah mana u muuqan sidii qof qaan gaar ah oo kale. Kacaankan waxay noqon kartaa talaabada ugu horeysa ee isbedelka dhanka Fuchsia OS, oo noqon doona nidaamka xiga ee hawlgalka ee “G” weyn. Android 10 shaki la’aan wuxuu calaamad u noqon doonaa dhammaadka qarniga iyo bilowga mid kale marka loo eego taleefannadayada casriga ah ee macnaheedu yahay.
Dabcan, Android 10 sidoo kale waxay ka caawin doontaa dadka aan jeclayn teknolojiyada inay ogaadaan nooca ugu dambeeyay, maxaa yeelay waxay u fududaan doontaa sida soo socota lambarka. Iyada oo lagu sharfayo dhamaan noocyada Android oo leh magaca macaan, waxaan rabnay inaan liis garaynno dhamaan wixii ilaa iyo hada lagu jiray:
Android 1.0 Apple Foot
Android 1.1 rootida mooska
Android 1.5 Koob
Android 3.0 Malab